Rafitra fitakiana ho an'ny Counter-Strike 1.6 ► Counter Strike 1.6 Download
Rafitra fitakiana ho an'ny Counter-Strike 1.6
Febroary 17, 2022	Off	By roma
Eny, fantatsika rehetra, nahoana Counter-Strike 1.6 dia iray amin'ireo lalao malaza indrindra eran-tany. Tena malaza izy io satria tena mahaliana. Saingy tsy izany ihany - azonao atao ny manao basy maro amin'ity lalao ity ary mazava ho azy, afaka manao hetsika maro ianao. Afaka mahita namana vaovao ianao, afaka mianatra fahaiza-manao vaovao sy ny sisa. Saingy alohan'izany dia tsy maintsy milaza isika fa raha te-hisintona sy hilalao ity lalao ity ianao dia tsy maintsy mahafantatra zavatra sasantsasany momba ny rafitra takiana amin'ity lalao ity. Voalohany indrindra, tianay ny milaza, fa misy ordinateur kely indrindra ho an'ny CS 1.6 ary ny fepetra aroso ho an'ny CS 1.6. Noho izany, andao hiresaka bebe kokoa momba ireo zavatra rehetra ireo.
Inona no kely indrindra solosaina manokana ho an'ny CS 1.6?
Noho izany, voalohany indrindra isika dia te hiresaka momba ny kely indrindra fepetra arahana ho an'ny CS 1.6. Noho izany, CPU dia iray amin'ireo fepetra takian'ny rafitra. Ary inona no tsy maintsy CPU kely indrindra, mba ahafahanao milalao ity lalao ity? Manana vaovao tsara ho anao izahay - raha te hilalao ianao Counter-Strike 1.6, ny CPU kely indrindra dia tsy maintsy CPU- 0.8 GHz.
Ny fepetra iray hafa amin'ity lalao ity dia ny toerana malalaka amin'ny kapila mafy. Noho izany, firy ny toerana malalaka ilaina amin'izany? Manana vaovao tsara ho anao koa izahay – mila toerana malalaka 650 MB amin'ny kapila mafy ianao. Ary mazava ho azy, tsy maintsy miresaka momba ny Random Access Memory isika na azo antsoina hoe RAM fotsiny. Ohatrinona izany? Noho izany, mila 128 MB.RAM ianao.
Noho izany, araka ny hitantsika, ny fepetra faran'izay kely indrindra amin'ity lalao ity dia tsy avo, noho izany dia midika zavatra tena tsara izany - tsy dia zava-dehibe ny azo antoka, fa counter strike 1.6 dia hanomboka ara-dalàna amin'ny solosainao.
Inona no soso-kevitra fepetra arahana ho an'ny CS 1.6?
Saingy koa, tsy maintsy miresaka momba ny fepetra kely indrindra isika, fa tsy maintsy miresaka momba ny fepetra atolotra. Inona àry izy ireo? Voalohany indrindra, zava-dehibe ny milaza fa misy fepetra bebe kokoa ary ambony kokoa. Noho izany, rehefa miresaka momba ireo fepetra ireo isika dia tsy maintsy miteny hoe, voalohany, tsy maintsy manana fifandraisana tsara amin'ny Internet ianao. Mazava ho azy fa tsy maintsy miresaka momba ny RAM isika. Noho izany, firy no ilaintsika izany? Tsy sarotra ny milaza fa ambony kokoa ny RAM naroso. Noho izany, ny isa dia tena ambony ary 512 RAM. Andeha isika hiresaka momba ny toerana malalaka ny kapila mafy. Noho izany, firy MB no ilaintsika? Aroso ny manana 650 MB. Mazava ho azy fa zava-dehibe ny miresaka momba ny fanohanan'ny rafitra fandidiana ihany koa. Noho izany, ny fanohanan'ny rafitra miasa dia Windows Vista/xp/7/8/8.1/10. Ary tianay koa ny mitadidy fa mila totozy sy fitendry ianao hilalao. CS 1.6, Mety mila mikrofonina koa ianao raha te hiresaka amin'ny mpilalao hafa.
Noho izany, niresaka momba ny fepetra ilaina amin'ity lalao ity izahay. Noho izany, fantatrao izao, izay ilainao. Noho izany, mitandrema amin'ireo fepetra ireo ary milalao ny counter-strike 1.6 lalao.
Manolotra latabatra fitakiana solosaina notsorina ho an'ny Counter-Strike 1.6 lalao:
COUNTER STRIKE 1.6 Fangatahana rafitra farafahakeliny:
COUNTER-STRIKE 1.6 Fangatahana System natolotry:
Tagsfanondroana solosaina counter strike 1.6 counter strike 1.6 counter strike 1.6 Download COUNTER STRIKE 1.6 Minimum System Requirements cs 1.6 CS 1.6 Fepetra takiana amin'ny rafitra cs 1.6 fepetra ordinateur kely indrindra takiana amin'ny CS 1.6 Minimum Computer Requirement counter strike 1.6 soso-kevitra soso-kevitra counter strike 1.6 soso-kevitra soso-kevitra CS 1.6 fepetra counter strike fepetra counter strike 1.6 Fepetra cs fepetra cs 1.6
Nahoana Counter-Strike 1.6 dia malaza be